बिमानस्थलमा नाङ्गै दौडिएपछि...- रोचक - कान्तिपुर समाचार
पुस २५, २०७४ एजेन्सी
फुकेट (थाइल्याण्ड) — यौनवद्र्धक औषधि भियग्रा खाएर थाईल्याण्डको फुकेट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा होहल्ला गर्ने एक अमेरिकी नागरिक पक्राउ परेका छन् । थाई प्रहरीले उनलाई सोमबार पक्राउ गरेको हो ।
फुकेट बिमानस्थलमा कोरियाको इन्चोन जान लागेका उनी नग्न अवस्थामा थिए र उनले एयरपोर्टका कर्मचारी र अन्य यात्रुहरुलाई दुव्र्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ।
ति अमेरिकी नागरिक स्टिभ चो भएको थाई प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनले आफूले धेरै मात्रामा भियग्रा खाएकाले सन्तुलन बाहिर गएको स्वीकारेको थाई प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनको कोरिया यात्रा रोकिएको छ भने उनलाई फुकेटको एक अस्पतालमा राखेर उपचार गरिएको छ।
प्रकाशित : पुस २५, २०७४ १८:५८
पर्यटन तथा आतिथ्यता व्यवस्थापन विषय अध्यापनको तयारीमा एमयू
आवश्यक पूर्वाधार खोजीका लागि विश्वविद्यालयको टोली दैलेखको खागीतडामा
दैलेख — आगामी शैक्षिक सत्रबाट पर्यटन तथा आतिथ्यता व्यवस्थापन विषयमा पढाई सुरु गर्ने तयारी गरेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (एमयु)ले त्यसबारेको पूर्वाधार खोजी सुरु गरेको छ ।
दैलेखको लाफा होमस्टेमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइराला र रजिस्ट्रार डा.महेन्द्र मल्लको टोलीलाई स्वागत गर्दै महिलाहरु । तस्बिर : ज्योति कटुवाल/कान्तिपुर
आवश्यक अध्ययनका लागि विश्वविद्यालयको टोली दैलेखको खागीतडा पुगेको छ। प्रदेश ६ का उत्कृष्ट होमस्टेहरु अवलोकन गर्ने र पर्यटक तथा आतिथ्यता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार जुटाउने विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. उपेन्द्रकुमार कोइराला, रजिस्ट्रार डा.महेन्द्र मल्ललगायत २५ जनाको टोली दुल्लु नगरपालिकाको खागीतडामा पुगेको हो। रजिस्ट्रार डा. मल्लले खातिगडासहित अन्य स्थानमा रहेका होमस्टेको अध्ययन गरी पर्यटन विकासमा समेत सहयोग पुर्‍याउने बताए। दैलेख सदरमुकामबाट १२ किलोमिटर दूरीमा रहेको होमस्टे छामघाट र लोहोरे खोला दोभानबीचमा अवस्थित छ। लाफा होमस्टे होमस्टे एक वर्षदेखि सञ्चालनमा छ। स्थानीय संस्कृति र पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गरी होमस्टे सञ्चालन गरिएको हो। होमस्टेमा जिल्ला बाहिरबाट समेत आन्तरिक पर्यटक आउने गरेका छन्।
१६ जना परिवार मिलेर होमस्टे सञ्चालन गरेका हुन्। घर/घरमा स्थानीय जातका कुखुरा र खसीहरु पालिएका छन्। सञ्चालकहरुले स्थानीय उत्पादन मात्र खानपानमा प्रयोग गर्ने गरेको बताए। साँझ ७ बजे स्थानीय भेषभूषामा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउने गरिएको छ। उपकुलपति डा. कोइरालाले प्राकृतिक सौन्दर्यको क्षेत्रमा कसरी विकास गर्ने र अध्ययन अध्यापनको विषय बनाउने भनेर अध्ययन थालिएको बताए।
लाफाका होमस्टेका सञ्चालक रमेशकुमार आलेमगरले आफ्नो कला संस्कृति र मौलिकता संरक्षणका लागि होमस्टे सञ्चालन गरिएको बताए। विश्वविद्यालयको टोली अध्ययनमा आएपछि थप उर्जा मिलेको लाफाका सदस्यहरुले जनाएका छन्।
प्रकाशित : पुस २५, २०७४ १८:३८